10/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Andranomena : Mirongatra ny vaky trano
10/02/2018 admintriatra 0
Mampikaikaika ny mponina eny Andranomena sy ny manodidina ny trangana vaky trano, izay efa misesisesy eny amin’iny faritra iny. Miasa andro aman’alina araka izany ny mpitandro filaminana ao amin’ny boriborintany fahenina amin’ny fikarohana ireo olon-dratsy …Tohiny
Lalao Olimpika any Korea Atsimo : Malagasy tokana mandray anjara i Mialitiana Clerc
Na tsy manana ranomandry aza. Mihofahofa miaraka amin’ireo sainam-pirenena 93 mandray anjara amin’ny Lalao Olimpika atao any Pyongyang any Korea atsimo ny sainam-pirenena malagasy. Malagasy tokana mandray anjara amin’io lalao iraisam-pirenena io, ary nitondra ny …Tohiny
«F’iza no antoko be?»
Nahazo fanankianana avy amin’ny fanoherana ny antoko HVM hoe “antoko madinka sisa no manaiky hiaraka aminy”. Tsy hiditra lalina amin’izay resaka izay isika fa ny manitikitika ny saina fotsiny dia ny hoe “f’iza no antoko …Tohiny
Fambolen-kazo : Tanjona ny handrakofana 40 000 ha isan-taona
Napetraky ny fitondram-panjakana ho laharam-pahamehana ny fijakiana ny tontolo iainana, izay hita soritra ao anatin’ilay Vina Fisandratana 2030. Teboka iray lehibe ao anatin’io mihitsy ny fikajiana ny harena voajanahary ho an’ny fampandrosoana maharitra. Ho fanatanterahana …Tohiny
Fanatanjahantena : 90 tapitrisa Ariary ho an’ireo atleta hihazo an’i Djibouti sy Sina
Ny tso-drano zava-mahery. Mialoha ny hiaingan’izy ireo, dia noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha omaly ireo atleta malagasy hihazo an’i Djibouti sy Sina, ary nandritra izany no nanolorana vatsy ho azy ireo ...Tohiny
« Bois de rose » naondran’ny HAT : Lasa “Blanco” ve ny Bianco?
« Loka Mandela 2016 » : Voafantina tao anatin’ny maro ny Praiminisitra
Fanisam – bahoaka-HATOMBOKA ETO ANALAMANGA SY ANDROY